IChibi iBrenton, eKnysna-Indawo yeeNdwendwe.
Knysna, Western Cape, eMzantsi Afrika
Igumbi lakho lokulala e igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle sinombuki zindwendwe onguGenine
I-Meer Huisje Guest Suite yindawo eqaqambileyo nenomoya enokukhanya okuninzi kwendalo ebekwe kwiLake Brenton. Le ndawo yokuhlala ephangaleleyo inomnyango wabucala, kwaye ibekwe kumda weKnysna Lagoon (200meters ukusuka kwiLake Brenton Jetty, akukho mbono yechibi), kwindawo ekhuselekileyo ebizwa ngokuba yiBrentonwood. Ubuhle obukhuselekileyo, obuzolileyo kunye nobuhle bendalo bendawo bunika indawo yokuhlala ekhethekileyo ngelixa usenokufikelela ngokulula kuzo zonke iivenkile zodidi lokuqala kunye neenketho zokutyela eKnysna.
Indawo yeendwendwe inkulu kwaye ibanzi ineefestile ezinkulu ezivumela ukukhanya okuninzi kwendalo okubengezela kwimithi ejikeleze le propati. Esi sithuba sibonelela ngebhedi yobukhulu obutofotofo benkosi, indawo yokufunda yobuchwephesha obuphezulu, indawo yokungena yabucala, ipatio yabucala engaphandle enendawo yokuhlala kunye negumbi lomlilo, kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo elahlukileyo elinebhafu enkulu, ishawari yanamhlanje, indlu yangasese kunye nesitya.
Eyona nto eyenza le ndawo ibe yodwa kukuba unokuhamba-hamba uye eKnysna Lagoon ukonwabele umbono omhle, izibane zesixeko saseKnysna zibengezela mgama, zilungele abahlali belanga, okanye ukubukela umlobi kunye nengabangaba bezama ithamsanqa labo kwi-jetty, kwaye izikhitshana zendlu zingxilimbela ebusuku. Ukuba unethamsanqa usenokubona ukhozi lwaseAfrika luzingela elunxwemeni!
Ukuze ufumane amava ahlukeneyo, ungaqhuba phezu kwenduli ukuya kulwandle oludumileyo lwaseBrenton-On-Sea (imizuzu emi-4 yokuqhuba), ilungele ukuqubha, ukuhamba okanye ukonwabela nje ukubonwa kolu lwandle luhle kangaka.
Indawo yokutyela eButterfly Blu eBrenton-On-Sea, inika iimbono ezimangalisayo kunxweme lwaseBrenton kunye nokutya okumangalisayo. Umnyango olandelayo yi-Indigo Deli ethandwayo kunye nokukhethwa kwezinto ezonwabileyo kunye nekofu yasekhaya.
Uhambo lukaFisherman oludumileyo luhambo olufutshane olumnandi ecaleni konxweme oluhle lwaseBrenton-on-Sea, enemibono emangalisayo. Ikwabaleka ukuya ezantsi kwiBloko (usingasiqithi omncinci ukuya ngasempuma) ukusuka apho unokubona amahlengesi edlula kufutshane.
IBelvidere eyimbali kukuhamba nje imizuzu emi-5. kwaye ungakonwabela ubuhle basezulwini kunye nemtsalane yakudala yehlabathi yale lali ibekwe kunxweme olusentshona lwechweba. Imibono etshayelayo yamanzi kunye neentaba ezingaphaya, indawo enoxolo kunye nembali yokubhala ekhaya, yenza iBelvidere ibe yindawo enomdla. Yindlu yokugcina ubutyebi kubantu abathanda imbali eneengcambu zayo ezizinze kwiintsapho ezimbini zembali zaseKnysna, iRex kunye neDuthies. UNGAPHOSANI kundwendwela iCawe yaseBelvidere Holy Trinity Church, eyabamba inkonzo yayo yokuqala ngo-1853, iBelvidere Manor eyimbali ukuze ufumane izimuncumuncu kunye nesidlo esimnandi eBell Tavern okanye undwendwele iOak Leaf Café & Deli egxile ekuzinzeni nasekuziphatheni. iimveliso ezifunyenweyo.
Indawo yasemanzini yaseKnysna ikumgama oziikhilomitha ezili-10, kwaye inika ufikelelo kudidi lokuqala lokuthenga kunye nokhetho lokutyela oluquka indawo yokutyela edumileyo eyi-34 yaseMzantsi, eyi "Home of the Knysna Oyster."
IThen Harbour Town (imizuzu eyi-15 yokuqhuba) ibandakanya inani leendawo zokutyela (kubandakanya iSirocco's, iCol'Cacchio, i-Ile de Pain yokubhaka kunye necafe (indawo yethu yokubhaka esiyithandayo!) kunye neTapas), iivenkile zokutyela, iisalon, iiofisi zeshishini, iivenkile ezizodwa, kunye nevenkile indawo enkulu yokudlala esembindini yabantwana abancinci. Kwakhona
Ukuba ujonge ulwandle oluhle losapho olunobuhlobo ukuze ufunxe imitha yelanga ungajongi ngaphaya kweLeisure Island's Bollard Bay Beach (15 min drive). Olu lwandle lukhuselekileyo lokuqubha alunazidrophu ezintlithekayo kunye namanzi amaninzi angekho nzulu ukuze abantu abancinci bachaphaze kuwo. Kwaye ayisiyonto yokuqhotsa nje encinci. Olona lwandle luphambili kwiSiqithi soLonwabo, ulwandle lwaseBollard Bay lubonelela ngobuninzi bokwenza kwabancinci nabadala. Xa umsinga uphezulu ungaqubha, ulobe, ukhwele iphenyane okanye uhambe ngesikhephe. Xa uphantsi kwamanzi, pompa iiprawn ukuze zisetyenziswe njengesithiyelo okanye uhambe unqumle isanti ukuya kuthi ga kwiiNtloko.
Ngaselunxwemeni uya kufumana iilwandle zaseSedgefield's Swartvlei kunye neMyoli ezilungele ukuphononongwa kwe-rock pool kunye nokuhamba okungapheliyo kwi-low tide - yonke indlela eya eBuffalo Bay's Wild Side. Ulwandle oluphambili lwaseBuffalo Bay lulungele ukuqubha okukhuselekileyo kunye nokusefa okumangalisayo, enye yezona ndawo zidumileyo kwiiholide zoMzantsi Afrika.
Umbuki zindwendwe ngu- Genine
Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi ngayo nayiphi na imibuzo, imiyalelo okanye iingcebiso. Sisekhaya kwindawo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Knysna